TANDREVAKA SY KITOATOA : Lakrimozena nolalaovin-jaza nampisahotaka ny iray fiangonana
Nirohotra nivoaka sy namonjy varavarana nanavotra ny ainy daholo ireo mpino Katolika teny amin’ny Ekar Maria Mpanampy Soanierana teto an-drenivohitra, ny alahady lasa teo noho ny fofona nahasempotra tao am-piangonana. 21 novembre 2017
Tokony ho tamin’ny sivy ora sy sasany teo no niseho ity tranga ity ka folo minitra nialoha ny fanombohan’ny lamesa no efa naheno fofona tsy zaka intsony ny ankamaroan’ireo kristianina.
Nifanjevo nitsoaka araka izany ny ankabetsahan’ny olona mba hamonjy fodiana saingy nisy kosa ireo nijanona niandry fivavahana rehefa lefilefy ny fofona. Fotoana fohy taorian’izay fisavoritahana izay dia tonga teny an-toerana ny Polisy avy ao amin’ny Kaomisarian’i Mahamasina, niampy ireo avy amin’ny hery vonjy taitra ary ny zandary eny Ankadilalana.
Nandritra ny fandaminana sy nialoha ny nandraisana ny fepetra dia kolonely iray no nandray fitenenana tao am-piangonana ka nampitony ny rehetra. Natomboka ihany nony avy eo ny lamesa na dia efa hita taratra aza fa tsy misy intsony ny fifantohana. Talohan’ny firavana izay vao nanazava ny mompera nitarika ny fotoana fa niainga avy ao amin’ny tranona mpitandro filaminana iray ao atsinanan’ny Fiangonana io fofona lakrimozena io. Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa nolalaovin’ny zanak’ilay mpitandro filaminana mipetraka ao ilay baomba mandatsa-dranomaso ka latsaka tampoka teo an-tokotany.
Nirefotra sy nipoaka mafy izany ka nahatonga ny horohoro teny amin’ny manodidina. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy na naratra fa na izany aza dia toa nampiahiahy ny mpanara-baovao ny hoe ahoana no tonga teny am-pelatanan’ny ankizy ity fitaovana mahery vaika ity. Misokatra hatreto ny famotorana.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1923) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021